बिजुलीकाे तार भूमिगत गर्नु खतरनाक हाे ? के भन्छन् कुलमान,उर्जामन्त्री र प्राधिकरण प्रमुख - DURBAR TIMES
HomeNewsबिजुलीकाे तार भूमिगत गर्नु खतरनाक हाे ? के भन्छन् कुलमान,उर्जामन्त्री र प्राधिकरण...
बिजुलीकाे तार भूमिगत गर्नु खतरनाक हाे ? के भन्छन् कुलमान,उर्जामन्त्री र प्राधिकरण प्रमुख
अहिले काठमाडाैँ महानगरमा बिजुलीकाे तार भूमिगत गर्ने कार्य तीब्र रूपले अघि बढिरहेकाे छ । गत फागुन ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहरहरुलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन सुरु गरिएको उद्घोष गर्दै तार भूमिगत गर्ने परियोजना उद्घाटन गरेका थिए । प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण लगानीमा काठमाडौं जिल्लाको शहरी क्षेत्रभित्र तार भूमिगत गरिरहेकोे छ ।
तर यतिबेला भने याे काम खतरनाक भएकाे भन्दै उर्जामन्त्री र प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका टाेपबहादुर रायमाझीले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
उनले गृहजिल्ला अर्घाखाँचीमा यो काम ‘खतरनाक’ भएको दोहोर्‍याए । मन्त्री रायमाझीले भने, ‘कति साथीहरु मर्ने हुन्, अहिले कुलमानजीहरुले अन्डरग्राउण्ड बिजुली बनाउँदैछन् । त्यहाँ स्काभेटरले खन्न थाल्यो भने स्काभेटरको मान्छे पनि मर्छ, त्यो धेरै खतरनाक भइराखेको छ । अहिले त्यो अध्ययन भइराखेको छ ।’
रायमाझीले भने, ‘साथीहरुले के कारणले गरे, त्यो १२ अर्बको काम गरिहालेछन् । गरिसकेपछि अहिले त्यो खतरनाक भइराखेको छ । अस्ति महाराजगञ्जमा अण्डरग्राउण्डको शट भयो । अहिले बन्द गराएर माथिबाट ल्याइयो । अहिले तलको बन्द गरियो । झन् खतरा भो । अब यस्तो गर्दिया छ साथीहरुले ।’
के भन्छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक ?
प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य मन्त्री रायमाझीले भनेजस्तै तार भूमिगत गर्दा शहरमा जोखिम बढ्ने बताउँछन् ।
केही दिनअघि हामीले नै काम गर्दागर्दै ‘चपली क्षेत्रमा पुरानो भूमिगत लाइन जल्न पुग्यो,’ उनले भने,’त्यो घटनाले तार भूमिगत गर्दा जोखिम छ भन्ने देखाएको छ ।’ उनले भने
‘सँधै प्रविधिले सही ढंगले काम गर्दैन, त्यस्तोबेलामा दुर्घटना टार्न सकिँदैन,’ शाक्य भन्छन् ।
तार भूमिगत गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिए पनि भविष्यमा निर्माणका सडकमा काम गर्दा प्रविधिले सडकमुनिका पूर्वाधारबारे पर्याप्त सूचनाहरु दिन नसक्ने जोखिम देखिएको शाक्यको भनाइ छ । ‘यस्तो जोखिम सडक खन्दा मात्रै हुने हो, तारकै कारण सडकमाथि हिँड्ने मानिस र सवारी साधनलाई जोखिम भने हुँदैन,’ उनले भने, ‘तारबारे पर्याप्त सूचना नलिई खन्ने काम भयो भने दुर्घटनाको जोखिम छ ।’
त्यसका लागि प्राधिकरणले पनि तार बिछ्याइएको रुटबारे पर्याप्त र स्पष्ट अभिलेख र सूचनाहरु राख्नुपर्ने देखिएको शाक्यले बताए । ती सूचना सम्बन्धित नगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, सडक विभाग, नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पनि दिनुपर्ने शाक्य बताउँछन् ।
कुलमान भन्छन् फाइदै फाइदा छ
तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी गरेका विद्युत प्राधिकरण पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तार भूमिगगत गर्ने काम नेपालका लागि नौलो भए पनि विश्वभर नै प्रयोगमा आइसकेको बताउँछन् । पोलमा टाँगिने तारभन्दा भूमिगत गरिने तार सयौं गुणा बढी सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ ।
‘ओभरहेड तार नै खसेर मान्छे मरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय दुर्घटनाको सुरक्षाका हिसावले सबैभन्दा सुरक्षित उपाय तार भूमिगत गर्नु नै हो ।’
विद्युत सेवालाई विश्वसनीय बनाउन पनि यो काम अत्यावश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘तार भूमिगत भएपछि सामान्य हावाहुरीमा पनि लाइन काटिने समस्या हट्छ, सर्ट सर्किट र तारमा धुलो जमेर लाइनमा इन्सुलेसन अवरोधको समस्या पनि सकिन्छ ।’
घिसिङका अनुसार काठमाडौंमा एउटा क्षेत्रको सबस्टेसनमा समस्या आउँदा अर्को क्षेत्रबाट लाइन दिन सकिने गरी भूमिगत प्रणालीबाटै ‘रिङमेन’ सिस्टम पनि तयार गरिँदैछ । यसले निरन्तर बिजुली आपूर्ति गर्न प्राधिकरणलाई सहयोग पुग्छ । उनका अनुसार तार भूमिगत भएपछि विद्युत चोरी र प्राविधिक चुहावट पनि घट्छ । तार जमिनभित्र हुने भएकाले चोरीको सम्भावना लगभग समाप्त हुन्छ ।
‘तार भूमिगत गर्नुको अर्को मुख्य कुरा त शहरलाई सुन्दर बनाउने पनि हो,’ घिसिङले भने, ‘त्यसैकारण हामीले बिजुलीको तारसँगै अप्टिकल फाइबर पनि राखेका छौं, यसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि फाइदा पुग्छ, शहर पनि तारको कुरुप जालोबाट मुक्त हुन्छ ।’
Previous article१०० मा फोन गरी ‘ठूलो अपराध गरेर आफैंलाई सिध्याउँछु’ भन्ने पक्राउ
Next articleआजपनि २० लाख कित्ताकाे माग, तर ८१ कित्ता बिक्री